Speedup | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Speedup. Show all posts
PGWare PCBoost 4.5.25.2015 With Serial Key Full Version (4.6MB)
ကွန်ပျူတာ နှေးကွေး နေတာမျိုး ဂိမ်းတွေ ကစားလို့ မရ တာမျိုးတို့ ဖြေရှင်း ပေးမည့် PGWare PCBoost ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကွန်ပျူတာ အတွက် ဆော့ဝဲ ကောင်းလေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ အရမ်း နှေကွး နေတာမျိုး ကိုယ့် ကွန်ပျူတာမှာ ဂိမ်းတွေကို ကစားလို့ မရတာ များကို အလွယ် ကူဆုံး ဖြေရှင်းပေး နိုင်မည့် ဆော့ဝဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲ နာမည် ကတော့ PGWare PCBoost လို့ အမည် ရပါတယ်။ CPU အလုပ် လုပ်တာ နှေးတာမျိုး တို့ကို ဖြေရှင်းပေး နိုင်ပါတယ်။
New and improved modern user interface, easy and intuitive to use and compliant with Windows user interface guidelines
လိုအပ် သူများ အောက်မှာ ဒေါင်း.ယူနိုင် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 13, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ PC-Software, PC-TuneUp, Speedup
Avira System Speedup 1.5.0.1214 Multilingual | 4.99 MB
Unleash the power you didnt know your PC had. Has your computer slowed down over time? Give it maintenance, not patience! Your PCs best days are still yet to come. Clean it up. Tune it up. Free your PC to perform at its best! Throughout its life, your PC accumulates programs, logs, junk files, cookies and other scraps that stick around long after they are needed. All they really do is weigh down your memory and processor.
Lightens your computers load
Its your PC you should have the final word as to which files can be accessed by others. File Encryption keeps current files on lockdown against prying eyes, while the File Shredder and Disk Wiper ensure that deleted items cannot be recovered. The Uninstaller allows no remnants of removed applications to waste space on your machine or cause errors in the future.
Thoroughly inspects your PCs health
ကဏ္ဍ Cleaner, Speedup, SystemCare
PGWare SuperRam 6.1.12.2015 Final | 3.44 MB
ကဏ္ဍ Memory, Speedup, SystemCare
ဖုန်းကို မြန်ဆန် သွက်လက် စေမဲ့ Smart RAM Booster Pro v4.5.755 Apk
ဒီ APK လေးကတော့ Android users တွေ အတွက် ဖုန်းကို မြန်ဆန် သွက်လက် စေမဲ့ Smart RAM
Booster Pro v4.5.755 Apk လေးပါ။
ဗားရှင်း အသစ် လေး ထွက်လာလို့ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Speedup
Ashampoo WinOptimizer 2015 11.00.50 Multilingual | 27.30 MB
Ashampoo WinOptimizer is an easy-to-use suite of tools for maintaining and optimizing your Microsoft Windows® computer. It keeps your Windows installation free of unnecessary garbage and running smoothly while other computers just get slower and slower. Over 100 improvements were incorporated into the new WinOptimizer 8 by contrast to its predecessor WinOptimizer 7. This results in more speed and therefore improved efficiency especially within system maintenance and the adjustment of Windows®.
The cleaning modules registry optimizer, Internet cleaner and drive cleaner, for example, reachaplus of up to 500% in results. In real time the new live tuner pools all available resources in exactly those places where they are urgently needed. Existing processor cores, Windows® priorities and assigned usages of applications are customized, in order to ensureatrouble-free workflow. The resource-saving live tuner runs in the background – justamouse click away.
ကဏ္ဍ PC-TuneUp, Speedup, SystemCare
Uniblue Powersuite 2015 4.3.0.0 Multilingual
Uniblue Powersuite 2015 4.3.0.0 Multilingual | 21.97 MB
– Updating the old drivers to improve hardware functions
– Boost the resource management system to reduce the delay
– Removing unwanted files to recover hard disk space
– Optimizing system settings for maximum speed
– User-friendly interface for centralized three awards programs
– Integrated performance analysis
– Powerful and comprehensive productivity
– Automatic and unobtrusive service
– Reliable technology from Microsoft Gold Certified Partner
ကဏ္ဍ Cleaner, PC-TuneUp, Speedup, SystemCare
Systweak Disk Speedup 3.2.0.16503 DC 19.12.2014 Multilingual | 4.97 MB
– An advanced defragmentation andavery user friendly.
– Removes disk fragments effectively.
– Improves data access response time.
– Reduces computer’s boot-up time.
– Defrag Disk quickly and safely.
– cleans junk files, temporary files
– Identifies and safely removes duplicate files
Home page: www.systweak.com/DiskSpeedup/
ကွန်ပြူတာ နှင့် အင်တာနက် မြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် - SpeedUpMyPC 2015 v6.0.5.0+ Serial Key
Uniblue Speed Up My PC 2015 ဆိုတဲ့ ကွန်ပြူတာရဲ့ Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် Software သစ်ထွက်လာလို့
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အခု အသစ်ထွက်လာ တာကတော့ v6.0.5.0 ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အခု Software လေးက PC ရဲ့ Speed ကိုတင် မဟုတ်ပါဘူး Internet Speed ကိုပါ မြှင့်တင်ပေးနိုင် တယ်လို့ ဆို
ထားပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူ တာသုံးစွဲရတာနှေးကွေးလေးလံနေသူတွေ အတွက်လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန် လာအောင် ဆောင်
RAM နှင့် CPU function တွေကို အကောင်းဆုံး လှုပ်ရှား နိုင်အောင် မလိုအပ်တဲ့ ဟာတွေကို ဖယ်ရှားပေးမှာပါ။
စက်ကိုပုံမှန်သန့်ရှင်းပေးပြီး ဒီကောင်လေးကို Run ထားခြင်းဖြင့် အရင်ကထက် မိမိစက်က ပိုပြီးသွက်လက်နေတာ
၀င်းဒိုးအားလုံးမှာအသုံးပြု နိုင်ပြီး PC ကို Speed မြှင့်တဲ့ Software များကိုတော့ အသစ်ထွက်တိုင်း ကျွန်တော်အမြဲ
တင်ပေးနေကြပါ။ ဘာကြောင့် တင်ပေးနေလည်း ဆိုရင် တကယ်တမ်း သုံးဖူးသူတွေဘဲ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုသိ
ပါတယ်။ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Serial Key ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။
SpeedUpMyPC 2015 + Serial Key Full Version scans your laptop or computer to identify slowdown problems hindering speed, before wieldingastrong range of methods to optimize your digestive system for improved overall performance. Slowdown issues, for instance invalid registry entries are removed and also unused processes deactivated to improve system responsiveness. The actual result isacomputer system that works more rapidly and better.
Key Features SpeedUpMyPC 2015 + Serial Key Full Version:
SpeedUpMyPC 2015 can analysis and optimization speed internet connection
SpeedUpMyPC 2015 has automatic scanning system
SpeedUpMyPC 2015 has startup Manager.
Passmark PerformanceTest 8.0 Build 1043
Passmark PerformanceTest 8.0 Build 1043 | 26.17 MB
Home Page – http://passmark.com/products/pt.htm
▼ datafile.com ▼
Android ဖုန်း User များ အတွက် Internet speed မြှင့်တင်ပေးမယ်- Internet Booster (root) v4.5.2 apk
Booster Apk တွေ အများကြီး ရှိတဲ့ အထဲမှ ကျွန်တော် အခုနောက်ပိုင်း သဘောကျနေတဲ့ Internet Booster-
v4.5.2 .apk ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ သူ့မှာ အဓိကကျတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကြီး လေးခု ရှိပါတယ်။ RAM
Booster, Memory Cleaner, Battery Saver နဲ့ Network Re-setter ဆိုတဲ့ Function လေးခုပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ အဓိက အားအကြီးဆုံးကတော့ Internet speed မြင့်တင်တဲ့ ဟာကို အားကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အဲဒီ Function လေးခုထဲက အသေးစိတ် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Feature တွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်ချက်
ပေါင်း 40 ကျော်နေပါပြီ။ အဲဒါတွေကိုတော့ အသေးစိတ်ပြောပြ မနေတော့ဘူး အောက်မှာ Play store ပိုက်ဆံ
$ 5.23 လောက်ပေးရ ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်ဆီမှာတော့ free ပေ့ါဗျာ။
File Size ကလည်း 91.5KB လေးပဲ ရှိတာမို့ လိုအပ်ရင် သုံးနိုင်ဖို့ အတွက်ဒေါင်း ယူ ထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
Android OS 2.0 နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
▼ play store ▼ OR ▼ 1mobile ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, November 26, 2014 No comments:
Uniblue SpeedUpMyPC 2014 6.0.4.14 Multilingual | 17.47 MB
Advanced System Optimizer 3.6.1000.15950 Final + Patch
ဒီဆော့ဝဲလ်လေး ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ Windows Optimizer အတွက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် advanced
System cleaner လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ System error တွေကို အမြန်ဆုံး scan လုပ်ပြီးဖြေရှင်း ပေးနိုင်ပါတယ်။
၀င်းဒိုးအားလုံးမှာ (32-bit, 64-bit) အသုံးပြု နိုင်ပြီး ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ထဲမှာ Patch ဖိုင်လေး ကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Patch ဖိုင်လေးကို အင်စတော လုပ်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ ဖိုင်တည်ရှိရာ C/Program ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သူ့ဖိုင်ထဲမှာ ထည့်ပြီး
ကလစ်ပြီး Run လိုက်ပါ။
သူ့မှာ နောက်ထပ် လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အများကြီးပါသေးတဲ့ အတွက်အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါ..
Advanced System Optimizer isasystem tweaking suite that includes more than 30 tools to improve and tweak your PCs performance, to keep your system running smoothly, speedily, and error free. It offers an attractive and easy to use interface that organizes all tasks into categories and provides graphical statistics whenever possible.
▼ miloshare ▼
Auslogics BoostSpeed Premium 7.3.0.0 + Crack
ဒီ Auslogics BoostSpeed လေးကိုတော့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံး ရင်းနှီးကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့
ကွန်ပြူတာအတွက် အသုံးတည့်စေမယ့် Maintenance Tools ပေါင်း 13 မျိုး အထက် ပါဝင် ပါတယ်ဗျာ။
မိမိကွန်ပြုတာရဲ့ အင်တာနက်ကို မြန်ဆန်အောင်လုပ်ဖို့ အစွမ်းထက်တဲ့ optimizer ဆော့လ်ဝဲလေးပဲဖြစ်ပါ
တယ်။ ကွန်ပြုတာ ကို သန့်ရှင်းပေးပြီး မြန်ဆန်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အပြင် Startup မြန်ဆန်ခြင်း ၊ အင်
တာနက်မြန်နှုန်းမြှင့်ပေးခြင်း၊ Internet Explorer, Firefox တို့မှာ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်များ ကိုလည်း ရှင်းလင်း
ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင် ပါသေးတယ်။ Registry နှင့် Disks ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ junk files တွေကိုလည်းရှင်း
Disk Defrag , Internet Optimizer , Tweak Manager , Duplicate File Finder , File Shredder ,
Disk Wiper , Startup Manager , Uninstall Manager , Service Manager , Task Manager , System
Information , Rescue Center , Browser Manager စတဲ့ Tools တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီဆော့လ်ဝဲကို Windows XP / Vista /7 / 8 တင်ထားတဲ့ စက်တွေမှာ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
Auslogics BoostSpeed ​​Premium - isaprogram for the optimization of Windows, programs and Internet connection. Utility increases the speed of the memory, accelerates loading Windows, the performance Microsoft Office, The Bat, FireFox, Opera, Skype, cleans the registry and disk. BoostSpeed ​​encompasses famous Auslogics Disk Defrag, and the selection of new tools for today's computers. Later registry defragmentation BoostSpeed-ohm, computer speed increase due to the fragmentation of the registry files, reducing their size, as well as by eliminating errors in the registry.
"Defragment your hard drive
"Lock the possible ways of intrusion into the computer from the outside
"Complete cleaning disks from previously deleted files
င်္From: Pyae Phyo (MMiTD) by ရန်ကုန်သား
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Sunday, September 28, 2014 No comments: